Isbaanishku waa wadanka leh kuleylka ugu kul kulul Yurub | Saadaasha Shabakadda
Dhammaan waddammada adduunku si isku mid ah uma dhaqmaan saameynta kala duwan ee isbeddelka cimilada. Isbaanishku wuxuu ka mid yahay wadamada mowjadaha kuleylka u dhaqmaan si aad u xoog badan uguna badan. Halka wadamada kale dhacdooyinka mowjadaha kuleylka badanaa ay socdaan celcelis ahaan inta udhaxeysa 3 iyo 4 maalmood, Isbaanishka waxay soconayaan inta u dhaxeysa 4 iyo 5
Daraasad ayaa lagu sameeyay taas oo Machadka Baadhista Cilmiga Deegaanka iyo Daraasaadka Biyaha ee Golaha Sare ee Cilmi-baarista Sayniska (CSIC) oo lagu daabacay joornaalka sayniska ee Aragtida Caafimaadka Deegaanka, kaas oo lagu lafa guray hirarka kuleylka ee ka dhacay intii u dhaxeysay 1972 iyo 2012 18-ka dal ee dhacdooyinkan cimilada daran ay inta badan ku badan yihiin. Waa maxay natiijooyinka ay heleen?
Daraasadda la sameeyay, tirooyinka heerkulka ee ay cabiray Wakaaladda Saadaasha Hawada ee dhammaan caasimadaha gobollada ayaa la baaray. Sida abaaraha oo kale, ma jiro qeexitaan caalami ah oo ku saabsan waxa uu yahay mowjad kuleyl ah. Si kastaba ha noqotee, daraasaddu waxay ku saleysneyd laba iyo toban fikradood oo inta badan ay isku raaceen bulshada sayniska.
Sida laga soo xigtay xogta la helay ka dib dhammaan diiwaangelinta, heerka ugu sarreeya ee hirarka kuleylka waxaa qaata Spain in, Shiinaha ka dib, ay hogaamiyaan liiska waddamada halka hirar badan oo kuleyl ahi ka dhaceen tan iyo markii ay diiwaanno jiraan. Taasi kaliya maahan, laakiin kordhinta soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdooyinkan ba'an ayaa si aad ah u kordhay tan iyo 2003.
Kordhinta mowjadaha kuleylka ayay saynisyahannadu saadaaliyeen inay tahay cawaaqibka isbeddelka cimilada. Markay kululaato adduunku, saamaynta isbeddelka cimilada ayaa la xoojiyay. Isbaanishka celcelis ahaan waxaa jiray 32 hirar kuleyl sanadkiiba.
Aagga Isbaanishka ee ay dhacdooyinkan aad ugu urursan yihiin wuxuu ku yaal badhtamaha koonfureed ee Jasiiradda. Khatarta iyo heerka dhimashada ee hirarka kuleylka ayaa sidoo kale kordhay.
Isbaanishka, sidaan soo sheegnay marar badan, waa wadan aad ugu nugul isbadalka cimilada oo daraasado iyo diiwaanno ay sameeyeen saynisyahanno kadib ay xaqiijinayaan uun
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Isbaanishku waa dalka leh hirarka kuleylka ugu badan Yurub